के हो 'अप्रेसन बुनु'? कसरी समातिए बालक अपहरणकर्ता?
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, साउन २१
काठमाडौं, क्षेत्रपाटीबाट अपहरणमा परेका साढे ५ वर्षीय विशाल चौधरीलाई गत सोमबार प्रहरीले काँडाघारीबाट सकुशल उद्धार गर्यो। उनी साउन १२ गते स्कुलबाट फर्कने क्रममा अपहरणमा परेका थिए।
महानगरीय अपराध महाशाखाले अपहरण भएको १० औं दिनमा मुख्य योजनकारसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मुख्य योजनाकार रामेछाप, मन्थली नगरपालिका-१२ घर भई ललितपुरको कुसुन्ती बस्ने २६ वर्षीय राजु विक र उनका साथी विष्णु पाण्डे छन्। उनीहरुलाई गाईघाटबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनीहरु कसरी समातिए त?
बालक अपहरण भएको चार दिनपछि विक एकाएक गायब भए। त्यसअिघ तीन दिन विक र चौधरी सँगसँगै थिए।
प्रहरीले यी दुई जनै अपहरणकारी भएको अनुमान गरे पनि पर्याप्त प्रमाण फेला पार्न सकेको थिएन। छानबिन भने जारी राखेको थियो। त्यही क्रममा विक हराएपछि प्रहरीले उनी नै अपहरणकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै खोजी तीव्र पारेको थियो।
प्रहरीका अनुसार अपहरणपछि पाण्डेले भिनाजुको सिमकार्ड प्रयोग गरेर बालकका बाबु अजय चौधरीसँग ५० लाख फिरौती मागेका थिए।
पाण्डेले अपहरित बालकलाई गोठाटारमा भाडामा बस्दै आएकी आफ्नै दिदीको घर लगेर राखेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसपछि विक गाईघाट गएका थिए भने पाण्डे रामेछाप पुगेका थिए। प्रहरीले उनीहरुको फोन ट्रयाक गरिरहेको थियो। यही आधारमा महाशाखाबाट गएको प्रहरी टोली, रामेछाप र उदयपुर प्रहरी मिलेर विक र पाण्डेलाई पक्राउ गरेको महाशाखाका एसएसपी दिनेश अमात्यले बताए।
अपहरण गर्ने विक चौधरीका नजिकका साथी हुन्। कक्षा १ देखि सँगै पढेका विकले चौधरीको व्यापार फस्टाएपछि डाह भएर उनको छोरा अपहरण गरेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्।
महाशाखाका एसएसपी अमात्यले पहिला बच्चाको सकुशल उद्धार गर्नुपर्ने भएकाले आक्रामकभन्दा विवेक पुर्याएर अप्रेसन चलाएको बताए। 'अपहरण गर्ने त पछि पनि पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो,' उनले भने।
प्रहरीले यो अपहरणलाई 'अप्रेसन बुनु' नाम दिएको थियो। यो नामको पछाडि पनि कारण छ। सोमबार बालक भेटिएपछि प्रहरीले 'तिमी कोसँग बसेको' भनेर प्रश्न गरेका थिए। यसको जवाफमा बालकले 'बुनुसँग बसेको' बताएका थिए।
त्यसपछि प्रहरीले विक र चौधरीका आफन्त सबैको घर पत्ता लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। चौधरी र विकका ९ जना आफन्तकहाँ पुगेर छानबिन गरेको अमात्यले जानकारी दिए। अन्तत: प्रहरीले पाण्डेकी दिदी अनिता केसीको ५ वर्षीया छोरीको नाम बुनु भएको र बालकलाई त्यहीँ राखेको पत्ता लगाएको थियो। बालक चार दिन बुनुसँगै खेलेर बसेका थिए।
महाशाखाका डिएसपी अजय केसीले बुनु खोज्दै जाँदा अपहरणकारी पत्ता लाग्ने भएकाले अप्रेसनको नाम नै बुनु राखिएको बताए। बालक अपहरण गरेपछि विकले गोठाटारस्थित उनकी दिदीको घरमा राख्न लगाएका थिए। खर्च पनि दिएका थिए।
पाण्डेले भिनाजु घरमा नभएको मौका पारेर बालकलाई चार दिन दिदीको घरमा लुकाएको प्रहरीले जनाएको छ। बच्चाको रेखदेखमा पाण्डे आफैं खटिएका थिए। उनले दिदीलाई विश्वासमा लिन 'बच्चाकी आमा बिरामी परेर अस्पताल भर्ना भएको र बाबु कुरुवा बस्नुपर्ने भएकाले रेखदेखका लागि ल्याएको' बताएका थिए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २१, २०७४, ०४:०७:१२